Saddex halyeey Man United ah oo ku booriyay kooxda inay sameeyso saxiixa xiddig muhiim ka ah Barcelona – Gool FM
(Manchester) 06 Agoosto 2019. Saddex ka tirsan halyeeyada kooxda Manchester United ayaa muujiyay sida ay u xiiseenayaan in Red Devils ay la soo saxiixato weeraryahankii hore Liverpool isla markaana haatan u ciyaara Barcelona ee Luis Suarez.
Inta lagu gudi jiray wareysi ay ku bixiyeen telefishanka rasmiga ah ee kooxda Manchester United ayeey saddexda halyeey ee kala ah Lou Macari, David May iyo Paddy Crerand sheegeen inay si weyn u xiiseenayaan inay arkaan Suarez oo xiran maaliyada Red Devils, maadaama uu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka.
Soo jeedinta fikradan cusub ayaa waxay ka careysiisay taageerayaasha kooxda Manchester United kuwaasoo wali u arka Luis Suarez inuu yahay cadawgooda, maadaama uu horey ugu soo ciyaaray Liverpool.
Sidoo kale Taageerayaasha ayaa waxay wali xasuustaan aflagaadadii iyo cunsurinimadii uu u geystay laacibkoodii hore ee reer France Patrice Evra inta lagu gudi jiray kulan horey u dhex maray kooxaha Man United iyo Liverpool.
Yeelkadeeda, halyeeyada kala ah Lou Macari, David May iyo Paddy Crerand ayaa waxay xaqiijiyeen in weeraryahan Luis Suarez uu wax badan ku soo kordhin doono Manchester United, iyagoo carabka ku adkeeyay inaysan u eegi doonin inuu horey u soo xirtay maaliyada Liverpool.
Laakiin si kasta ay noqoto, waxaa xiligan adag in Man United ay la soo saxiixato Luis Suarez inta lagu gudi jiro suuqan kala iibisiga ee xagaaga kaasoo ka harsan laba maalmood oo kaliya inuu ka xirmo dhanka England.
Laakiin wargeyska “Daily Mirror” ayaa aaminsan in hadaladan ka soo yeeray saddexdan halyeey ay abuuri karto fursado lagu sameyn karo arrintan mustaqbalka.